पाल्पामा सवारी दुर्घटनाको दर घट्दो – Nepalpostkhabar
पाल्पामा सवारी दुर्घटनाको दर घट्दो
nanda । १२ श्रावण २०७७, सोमबार १३:४८ मा प्रकाशित
रामपुर (पाल्पा), ः पाल्पा जिल्लामा पछिल्ला वर्षमा सवारी दुर्घटनामा कम आएको पाइएको छ । पछिल्ला तीन वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा वर्षेनी सवारी दुर्घटनाको दर जिल्लामा घट्दो अवस्थामा छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा जिल्लामा २३ जनाले सवारी दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाएका छन् । जसमा पुरुष २१ र महिला दुई रहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रमुख प्रहरी नायव निरिक्षक पृथ्वीनारायण काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।
एक वर्षको अवधीमा सवारी दुर्घटनामा परी ३५ पुरुष, पाँच महिला र एक बालिका गरी ४१ जना गम्भीर घाइते भएका छन् भने सामान्य घाइतेको संख्या ३१ रहेको छ । जसमा पुरुष २२, महिला सात, बालक दुई छन् ।
आ.व. ०७५-०७६ मा २४ पुरुष, ११ महिला, तीन बालक र दुई बालिका सहित ४० जनाले सवारी दुर्घनामा ज्यान गुमाएका थिए भने आ.व. ०७४-०७५ मा पुरुष ३१, महिला ११, बालक एक, बालिका तीन गरी ४६ जनाले सवारी दुर्घनामा परी ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क छ ।
“ट्राफिक नियम पालना, सडक दुर्घटना न्युनिकरणका लागि कार्यालयले चालक तथा यात्रु संगको सचेतना कार्यक्रम, सडकको अवस्थामा क्रमिक सुधार हुदै जादा दुर्घटनाको दरमा कमी आएको छ” उहाँले भन्नुभयो ।
ट्राफिक प्रहरीले राजमार्ग तथा विभिन्न सडक, सदरमुकाम तानसेन लगायतका क्षेत्रमा सवारी साधन रोकेरै चालक तथा यात्रुलाई ट्राफिक नियमबारे जानकारी गराउँदै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा जिल्लामा ६९ वटा सवारी साधन दुर्घटना भएका छन् । जसमा ट्रक दुई, ट्रिपर नौ, बस चार, जिप भ्यान र कार १३, ट्याक्टर ११, मोटरसाइकल २८ र डोजर दुईवटा रहेका छन् ।
गएको वर्षमा जिल्लामा १३ हजार सात सय ८२ वटा सवारी साधन कारबाहीमा परेका छन् । ट्रक, ट्रिपर तीन हजार ३१६, बस दुई हजार ३५१, जिप, कार र भ्यान तीन हजार ९५, ट्याक्टर एक हजार ४१८, मोटरसाइकल तीन हजार ६०२ सवारी कारबाहीमा परेका छन् । मापसे सेवन गरी सवारी चलाउनेमध्ये एक सय ८७ कारबाहीमा परेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा विभिन्न सवारी कारबाहीबाट रु ८३ लाख ७३ हजार ५००, आ.व. ०७५-०७६ मा रु ९१ लाख १९ हजार ५०० र ०७४-०७५ मा ७९ लाख २५ हजार राजश्व सङ्कलन भएको छ ।